Qiso Naxdin & Uur ku taalo ah. “Ha Aqrin Hadaadan Awoodin Qisadan”
You are here: Home » Arimaha Bulshada » Qiso Naxdin & Uur ku taalo ah. “Ha Aqrin Hadaadan Awoodin Qisadan”
02/11 02:1124 commentsViews: BALCAD MEDIA: Qiso yar balse xanuun badan waxa ayna ka dhacday magaalada Muqdisho todobaadkii hore waxaana ka soo xiganay ilo lagu kalsoon yahay oo asxaab la ah shabakada arimaha qoyska ee Alcarabiya.
Goob joogayaal ayaa sheegayaan in wiilkaan ayaa xariir waxa uu lalahaa gabar taasi oo ay magaalada isku barteen in muddo ahna qadka uu jaceyl been ah kaga jilayay .
Waxa uuna wiilkaas ahaa mid xun balse gabarta ku qiyaanay una jlay in uu yahay nin wanaagsan , waxa uuna kor iyo hoos ,geed dheer iyo mid gaaban u fuulay in mar uun uu ku qanciyo in ay kulan wada qaataan fool ka fool ah .
Talaabo talaabo ayuu ugu qanciyay in jaceyl saafi uu u qabo farxadna uusan dareemeyn hadii dhankiisa aysan joogin , waxa uuna ugu dambeyntii ku qnaciyay in gurigiisa kula kulanto maalin axad ah .
Waxa uu ka dhaadhciyay in jawi Romantic ah ay wada qaadanayaan ayna ka hadlayaan sidii mustaqbal u wadaagi lahaayeen waa ayna ka ogalaatay , intii uu sugayay imaashaheeda ayuu waxa uu wacay labo saaxibadiisa ah balse aan qoyskiisa soo dhex galin waxa uuna uu sheegay in hilib maacan u bisil yahay ayna xaafadiisa yimaadaan.
Saaxibadiisa waa ay yimaadeem waxa uuna u sheegay in gabar ay u soo socoto oo uu doonayo in ay kula baashaalaan ,intii saacadda ku dhicin waqtiga i balanta ayaa waxaa wiilkaas soo wacay hooyadiis oo u sheegtay in dhaqsi uu u yimaado guriga aabihiis maadaama xaaladiisa adag tahay oo lagu soo booday , waxa uuna wiilashii u sheegay in uu baxayo balse waxa uu wiilasha kula balamay in gabartaas ay ku sameeyaan wax waliba oo macaan ah .
Waa kuwaan saaxibadiisa oo gurigiisa ku sugaya gabartii ,waa ay timid sida balanta aheyd waa ay kufsadeen damiir laawayaasha ,waxa ayna ka tageen guriga xilli gabartii ay miir beeshay walaalkeedana oo aaday hooyadii si xaalka odayga uu wax kala socdo.
Xaashaa Lillaah hooyadii ayaa durba weydiisay wiilkii maxay walaashaa ku soo raaci weysay ? y